FANAFIHANA MAHERY VAIKA TENY ITAOSY : Saron’ny zandary ireo jiolahy nahavanon-doza
Araka ny loharanom-baovao voarainay tamin’ny zandary, omaly maraina dia saron’ny zandarimariam-pirenena ny 8 marsa 2018 lasa teo, ireo lohandohany tamin’ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana sady mpamono olona teny amin’iny faritra manodidina an’Itaosy rehetra iny, izay tena nampikaikaika ireo mponina. 19 mars 2018
Noho ny fiaraha-miasa teo amin’ny vondron-tobim-pileovana Itasy sy ny tobim-paritra Itaosy dia sarona ihany izy ireo ny farany. Miisa 4 no voarohirohy tamin’ny fanafihana teny Itaosy tamin’ny volana desambra 2018 lasa teo.
Anisan’ireo voasambotra izy ireo ka taorian’ny famotorana nataon’ny zandary miasa any Itasy dia manao ny fanadihadiana tandrify azy indray ny tobim-paritra Itaosy ny 17 marsa 2018. Raha tsiahivina dia nitrangana fanafihana mitam-piadiana nifanesy teny Itaosy ny faramparan’ny volana desambra 2017 lasa teo. Ny iray dia izay niseho teny Antanetibe Ambohidrapeto ny 18 desambra teo tokony ho tamin’ny 7 ora sy 30 minitra hariva. Nahaverezana vola Ar 2.600.000 izany ary jiolahy miisa 6 no nitondra basy Kalacknikov no nanatanteraka izany.
Efa-dahy indray no nanao ny fanafihana nitondra Kalacknikov nitovy tamin’io ihany ny 23 desambra 2017 tao Andohatanjona tamin’ny 7 ora sy 20 minitra. Naharatrana olona 2 sy namoizana ain’olona iray ary nahaverezana vola Ar 300 000 teo amin’ireo niharam-boina tamin’izany. Nanao ny fikarohana lalina ny zandarimariam-pirenena tao Itaosy ary nisy ny fifanankalozam-baovao teo amin’izy ireo sy ireo mpiara-miasa any amin’ny faritr’Itasy noho ny fisiana fanafihana mitovitovy fomba fiseho eo amin’ny faritra iadidian’ny roa tonta, indrindra moa fa marika iray ihany ny vodim-bala hitan’ireo mpanao famotorana tamin’ireo fanafihana niseho rehetra.
Rehefa tratran’ny zandary avy any Itasy àry ny iray tamin’ireo jiolahy dia nahazo fanampim-baovao mikasika ny toerana misy ireo namany kosa ny zandary ao Itaosy. Nidina avy hatrany teny Ambohidrapeto nisambotra ireo jiolahy hafa namany ny 8 marsa tamin’ny 10 ora maraina. Teo am-pivarotan-kena, tsy nanampo na inona na inona ireo jiolahy miisa 3 no nigadona ny zandary. Voasambotra tsy nahetsika ny iray raha mbola nifanenjehana kosa ny roalahy vao azo.
Nalefa nankany amin’ny vondron-tobim-pileovana Itasy aloha izy ireo mba hanaovana ny famotorana mikasika ny fanafihana mitam-piadiana nataony tany amin’iny faritra iny ka tafiditra am-ponja vonjimaika teny Tsiafahy noho izany. Nalain’ny Borigadin’ Itaosy kosa izy ireo ny 17 marsa 2018 mba hisitrahan’ireo olona eny Itaosy izay niharam-boina ny zony feno amin’ny famaliana sy fanomezana tohiny ny fitoriana napetrak’izy ireo teny anivon’ny zandarimariam-pirenena Itaosy noho ireo heloka bevava nihatra tamin’izy ireo, izay efa voatanisa etsy ambony. Hatolotra tsy ho ela ny fampanoavana indray izy ireto aorian’ny fanadihadiana.